तिहारमा सयपत्रीकाे आयात घट्याे: फूलमा आत्मनिर्भर बन्दै | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
तिहारमा सयपत्रीकाे आयात घट्याे: फूलमा आत्मनिर्भर बन्दै
कात्तिक ९, २०७६ शनिबार १५:५०:१८ | मदन पौड्याल
काठमाण्डाै – तिहार सुरु हुन लागेसँगै सयपत्री, मखमली, गोदावरीजस्ता फूलको कारोबार बढेको छ । तिहारमा मात्र होइन, अरु बेला पनि फूलको उत्तिकै महत्व हुन्छ । स्वागत, साैन्दर्य, सजावट तथा धार्मिक कार्यमा फूलको प्रयोग हुन्छ । घर आँगनमा ढकमक्क फूल फूलेसँगै तिहारको रौनक सुरु भएको छ ।
तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वमा अरु बेलाभन्दा फूलको माग बढी हुन्छ । एकैपटक धेरै माग हुँदा स्वदेशी उत्पादनले पुग्दैन । त्यसैले हरेक वर्ष भारतबाट फूल आयात गर्ने गरिन्छ ।
तर पछिल्ला वर्षहरुमा भारतबाट फूलको आयात घट्न थालेको छ । विगतमा भन्दा यसपाली भारतबाट फूल कम आयात हुने भएको छ । गएको वर्ष ३० लाख रुपैयाँ बराबरको तीन लाख सयपत्री फूलको माला आयात भएकोमा यस वर्ष झण्डै सवा २ लाख मात्रै सयपत्रीको माला आउने फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन नेपालले जनाएको छ ।
फूल खेती फस्टाउँदै
बर्सेनि फूल खेती फस्टाउँदै गएपछि आयात घटेको हो । पछिल्ला वर्ष नेपालमा फूल खेती तथा नर्सरी बढ्दै गएका छन् । माग बढेपछि व्यवसाय पनि बढेको छ । फूल फूलाउन खासै समस्या नरहेको व्यवसायीको अनुभव छ ।
माग पनि राम्रै भएकाे तर बजारसम्म ल्याउन भने समस्या रहेकाे बताउनुहुन्छ, व्यवसायिक रुपमा फूल खेती गर्दै आउनुभएका विद्या नर्सरीका दुर्गा सापकोटा । बजारमा फूलको माग बढेसँगै व्यवसायिक फूल खेती गर्नेहरु पनि थपिँदै गएका छन् ।
सापकोटाजस्ता ७ सयभन्दा धेरै उद्यमी व्यवसायिक रुपमा फूल खेतीमा लागेका छन् । फूल खेतीमा झण्डै ४५ हजारले रोजगार समेत पाएका छन् । देशैभर १ सय ५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फूल व्यवसाय भैरहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
माग धान्न २०६४/६५ तिर झण्डै ८० प्रतिशत फूल आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । नेपालमै उत्पादन भएको फूलले नेपाली बजारको ८० प्रतिशत माग पूरा गरेको छ । फूलको धेरै माग हुने तिहार र छठ पर्वका लागि मात्रै आयात हुने गरेको छ ।
सयपत्री आउँछ, मखमली जान्छ
तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूलमध्ये सयपत्री मात्रै भारतबाट आउँछ । तिहारमा सयपत्री र प्रणय दिवसमा रातो गुलाब आयात गर्नुपरे पनि मखमली र गोदावरी फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर बनिसकेको छ ।
मखमली झण्डै २ लाख निर्यात हुँदा सवा २ लाख सयपत्रीका माला ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । गएको वर्ष तिहारमा १७ लाख माला खपत भएकोमा ३ लाख माला आयात गरिएको थियो ।
तर यसपाली २२ देखि २५ लाख तयारी मालाको माग हुने अनुमान एसोसिएशनको छ । तिहारमा सयपत्री फूलको माला बढी माग हुने भएकाले भारतबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
सयपत्री आयात गरे पनि नेपाली बसोबास गरेका देशमा तिहार मनाउन मखमली फूल निर्यात हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ अर्ब ४२ करोडको फूलको कारोबार भएकोमा यो वर्ष साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने एसोसिएशनको अनुमान छ ।
फूलमा आत्मनिर्भर उन्मुख
पर्व विशेषमा यसै पनि फूलको माग हुन्छ । पछिल्ला वर्ष बढ्दो शहरीकरणले फूलको माग बढेको छ । फूलको माग बढेसँगै व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र सीमित नर्सरी मुख्य शहर पोखरा, बुटवल, नारायणघाट, विराटनगर, धरान, धनगढी जस्ता विभिन्न शहरमा फैलँदै गएको छ ।ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, झापा लगायतका ४३ जिल्लामा फूल खेती विस्तार भएको छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरु फूल खेतीमा लागेका छन् ।
स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग तथा पालिकाले समेत सहयोग गर्न थालेपछि पनि फूलखेतीमा आकर्षण र उत्साह बढेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । सरकारले धेरैथोरै भए पनि व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने गरेको छ ।
सरकारसँग सहकार्य गरी ४२ हजार वर्गमिटर ग्रीनहाउस समेत जडान गरिएको फ्लोरिकल्चर एसाेसिएशनले जनाएको छ । तर गाउँमा उत्पादन भएका फूल बजारसम्म आइपुग्न नसक्दा थोरै आयात गर्नुपर्ने एसोसिएशनको दाबी छ ।
फूलमा आत्मनिर्भर उन्मुख अवस्था छ तर आत्मनिर्भर नै हुन भने ग्रीन हाउस बढाउने, खेती थप विस्तार गर्ने, गाउँघरमा फूल्ने फूललाई बजारसम्म ल्याउने तथा रित्ता बनपाखाको सदुपयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
टोखा नगरपालिकाले सलह मार्नेलाई प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ प्रोत्साह...
क्वरेण्टीनबाट घर फर्किएका पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण
सलह भगाउन तत्काल यी काम गरौँ
अगस्टदेखि कुवेतले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने, कुवेत प्रवेश ...
चटयाङ लागेर खेत रोप्दै गरेका चार महिलाको ज्यान गयो
गण्डकी प्रदेशमा थपिए ८ सङ्क्रमित
पैसालाई कसरी सङ्क्रमणरहित बनाउने ?
सुदूरपश्चिम सरकारको तथ्याङ्क नै नक्कली, भेन्टिलेटर नभएको अस्पता...
रोटा भाइरसविरुद्धको खोप आजदेखि प्रयोगमा
ओली रणनीति बनाउँदै : प्रचण्ड–नेपाल समूह दबाब बढाउँदै
हिमालय एअरलाइन्सको नयाँ उडान तालिका सार्वजनिक, कहाँबाट कहिले ?
नेपालमा रहेको सलहको झुण्ड विखण्डन, अर्को झुण्ड भारतमै
आज ६ उडानमार्फत नेपाली स्वदेश फर्कंदै
सिरि ए फुटबलमा ईन्टर मिलानको फराकिलो जित
सुनको भाउ तोलामा एक सय रुपैयाँ घट्यो, कारोबार नहुँदा सुनचाँदी बजार सुनसान
मलेसियामा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि नयाँ उडान तालिका सार्वजनिक
आज खाडीका चार देश र मलेसियाबाट आइपुगे नेपाली, कतारबाट १० शव पनि ल्याइयो